«Aoka isika hiatrika amim-pahavitrihana ny fitoriana ny evanjely amin’ny endrika vaovao» - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
FITORIANA NY EVANJELY AMIN’NY ENDRIKA VAOVAO SY
«Aoka isika hiatrika amim-pahavitrihana ny fitoriana ny evanjely amin’ny endrika vaovao»
Nanangona Chico il y a 3 années
Tao anatin’ny Sinoda momba ny fitoriana ny evanjely amin’ny endrika vaovao, ny Papa teo aloha, Benoit XVI dia nampahalala ho ren-tany ho ren-danitra ny Taratasy apostolika PORTA FIDEI, ho an’ny Taonan’ny Finoana.
Ho an’ny Eveka, ny Pretra, ny Relijiozy sy ny Kristianina tsara sitrapo rehetra eto Madagasikara
FITORIANA NY EVANJELY AMIN’NY ENDRIKA VAOVAO SY NY TAONA MASIN’NY FAMINDRAMPO
(...) Niaraka tamin’izay no natsangana ny Filankevitra Pontifikaly ho an’ny fampandrosoana ny fitoriana ny evanjely amin’ny endrika vaovao (11 Oktobra 2012).
Isika eto Madagasikara, indrindra amin’ny ankamaroan’ny faritra isam-paritany, dia mbola ao anatin’ny sehatra « voalohany » amin’ny fitoriana ny evanjely, mba tsy hilazàna hoe mbola ao anatin’ny dingana mialoha ny fitoriana ny evanjely mihintsy (toy ny tsapa ao amin’ny diosezin’i Port Berge, izay tsy ahitàna kristianina afatsy 2%-n’ny mponina fotsiny – ka ny ankamaroany dia mbola ao anatin’ny fivavahana nentin-drazana –). Ao anatin’ny Evangeli Nutiandi laharana faha 21, dia nosoritan’i Papa Paul VI Olontsambatra mazava tsara fa ny antom-pisiana fototry ny Eglizy dia ny fitoriana ny evanjely ary ilay mpitory voalohany sy lehibe indrindra dia i Jesoa.
Izany fitoriana ny Evanjely izany dia tsy safidy fa tena raiki-tapisaka amin’ny maha izy azy ny Eglizy. Araka izany, ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao dia endrika manetsika ny Eglizy te hampahalala ny olombelon'ny taona arivo fahatelo fa ny vokatry ny fivoarana ara-teknika sy ara-tsiansa dia tsy mitondra vahaolana amin’ireo karazana sedram-piainana sy fahasahiranana tsy maintsy atrehina ireo. I Jesoa no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana. Izy no manambara amintsika ny Fitiavan’ny Ray, izay tsy inona fa ny Famindrampony.
Ny fitoriana ny Evanjelin’i Jesoa Kristy dia tsy miova ; tsaroantsika mandrakariva amin’izany ilay teny efa be mpahalala, nambaran'i Papa Md Jean Paul II tao Port au Prince, Haïti (9 Mars 1983) momba ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao manao hoe : “ vaovao amin’ny zotom-po, amin’ny fomba amam-panao, amin’ny fanehoana azy”, fa ny Evanjely dia tokana ihany.
Ankehitriny anefa dia tsara ihany ny manamarika fa miatrika endrim-piaraha-monina vaovao izay miantso ny Eglizy ary mitaona azy hanome valin-teny mahafapo hanamarina ny Fanantenana izay voiziny (1P3, 15) : kolotsaina miampita (miendrika fitsitokotokoana), toekarena, fitantanana, fikarohana ara-tsiansa sy ara-teknika.
Any amin’ny Firenena sasany, izany fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao izany dia miantefa indrindra amin'ireo olona vita batemy nefa kosa tsy nandray ny Evanjely, na koa ireo nihataka tamin'ny Eglizy. Aty amintsika kosa manoloana izany, dia tsy mitsaha-mitombo ny isan’ireo mpino.
Izany no nahatonga ny Fivondronam-ben’ny Eveka nanangana ity Commission Episcopale ity, taorian’ny Sinoda momba ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao. Ny Commission anefa dia tsy afaka miasa raha tsy noho ireo rehetra vita batemy ihany (Eveka, pretra, mpanokantena, laika) satria isika rehetra ireo no voaantso sy voairaka hitory ny hafaliana azo avy amin’ny Evanjely ao amin'ny fiainantsika andavan'andro. « Ny Fitiavana no manambara mihoatra ny teny, ao amin’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao, ary ny Fitiavana ihany no mampiseho ny maha mpirahalahy, ny maha mpifanolobodirindrina, sy ny fahafahana manampy ireo olona mila fanampiana, na ara-panahy izany na ara-batana » (n124) Cf Sinoda ho an’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Ny tanjon’ny COMMISSION
Ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao dia tsy midika velively hoe “Evanjely vaovao” satria « I Jesoa Kristy dia tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay » (Hb13, 8). Ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao dia midika hoe : "fampahazahoana ny finoantsika amin’ny alalan’ny fampitàna ny hevitry ny Fanantenana amin'ireo rehetra manantena Famonjena" (n 167)Cf. Sinoda ho an’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Araka izany, ny tanjon’ny Commission dia ny hamelo-maso ny asa pastoralin’ny Eglizy mba hanana endrika fanirahana sy pastoraly bebe kokoa, izay mifanaraka amin’ny tontolo ankehitriny (ny toriteny, ny asa fanirahana iarahana amin’ny mpino, ny sakramentan’ny fampihavanana, ny mariazy, ny fitiavam-bavaka iombonana, ny fanajana an'i Masina Maria sy ireo olomasina rehetra, indrindra fa ao amin’ireo Sanctuaires sy ny fivahiniana masina, ary ny fitsinjovana manokana ireo mijaly sy marary).
Ny Papa teo aloha Benoit XVI dia niteny momba « fahamaizana ara-panabeazana ny fahalalana ny maha-olona ny olona ». Ny tsiambaratelon’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao, izay ahitana ihany koa ny vokatra tsara entiny, dia ny valin-tenin’ny kristianina tsirairay amin’ny antso ho amin’ny Fahamasinana izay miantefa amin’izy ireo tsirairay avy. Izany hoe, ny fahatsapana ny fiainana ho toy ny antso ary ny fandraisana izany antso izany ho fanapahan-kevitra matotra ka hanarahan-dia an’i Kristy sy tsy hivadika Aminy.(n 161)Cf Sinoda ho an’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Tokony hanome vahana bebe kokoa ny ezaka apostolika, mifanaraka amin'ny tontolo iainana, ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Toy ny tamin’ny andro Pentekoty, nanirahana voalohany ireo Apostoly hitory ny Evanjely, dia teo anilan'izy ireo i Masina Maria. Tahaka izany ihany koa, dia mbola ho eo anilantsika izy amin’ireo ezaka rehetra hotanterahintsika eto Madagasikara, izy ilay Kintan'ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Ao anatin’izany lalana izany dia ilaina ny miainga avy ao amin’i Jesoa, izay hany tokana manome ny Fanantenana sy ny Hafaliana ho an’ny mpitory ny Evanjely rehetra mba hananan’izy ireo ny zotom-po sy ny risi-po vaovao hahafahan’izy ireo hitory an’i Jesoa Kristy, Evanjelin’Andriamanitra ho fanavotana ny olona rehetra manerana ny tany.(n 169)Cf. Sinoda ho an’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao.
Fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao sy ny Taona masin’ny Famindrampo.
Ny voan’ny Evanjely izay novolen’ny misionera dia efa manomboka mitombo; voninahitra ho an’Andriamanitra. Ity Taon-jobilin’ny Famindrampo ity (Jubileum Misericordiae), izay azo raisina ho toy ny androm-pahasoavana dia hararaotina handrosoana bebe kokoa amin’ny fitoriana ny Famindrampon’Andriamanitra sy "hanavotana ny Trano iombonana". Samy vavolombelon’ny antso-vonjy manakoako avy amin’ny lafy valon’ny tany tokoa isika rehetra, indrindra fa avy amin'ireo ivon-toeram-piaraha-monina maro isan-karazany, singanina manokana amin’izany ireo fadiranovana. Antso-vonjy amin’ny Famindrampon’Andriamanitra manoloana ireo karazan’endrik’ilay ratsy izay mitatao eo antampon-dohan’ny olombelona tsirairay avy ka mahatonga azy ho tandindomin-doza izany. « Raisiko ho zava-dehibe arak’izany ny fandraisana andraikitra, mba ho fotoana sarobidy sy manan-danja ho an’ny mpino rehetra ny Fihaonany amin’izany Famindrampon'Andriamanitra izany mandritra ny fankalazana ity Taona Masina ity. Iriko izy mba ho zary traik’efa velona hahatsapana fa akaiky Andriamanitra, azo kasihin-tanana ny halemem-panahiny, ka hanamafy ny finoan’ny mpino ary hitondra vokatra tsara ny fijoroany ho vavolombelona» (Papa Fransoa)
« Ambarao amin’izao tontolo izao ny Famindrampoko, ary enga anie ny olombelona rehetra hahatsapa ny halalin’ny izany Famindrampoko izany » (PJ 848).
« Alohan’ny hahatongavako amin'ny maha mpitsara tsy mitanila Ahy dia vohaiko midanadana ny varavaramben’ny Famindrampoko. Izay tsy te handalo amin’ny varavaran’ny Famindrampoko dia tsy maintsy handalo ny varavaran’ny fitsarako» (PJ 1146). Mankahery antsika hiaina ny fahasoavana entin’ity Taon-jobily ity ny Papa Fransoa. « Ny faniriako dia ny mba hahatraikefa miavaka ny Famindrampon’Andriamanitra ho an’ny tsirairay ny famelan-tsazy azo avy amin’ity Taon-jobily ity », hoy izy.
Mangataka aho amin’izao fotoanan’ny jobilin’ny famindrampo izao mba hiainan'ny Eglizy indray ny harena raketin’ny asa famindrampo ara-batana sy ara-panahy:
Ireo asa famindrampo ara-batana :
- Mamahana ireo noana
- Mampisotrorano ireo mangetaheta
- Mampitafy ireo miboridana
- Mandray ireo vahiny
- Miahy ireo marary
- Mitsidika ireo gadra
- Mandevina ireo maty
Ireo asa famindrampo ara-panahy:
- Manoro hevitra ireo misalasala
- Mampianatra ireo bado
- Mananatra ireo mpanota
- Mankahery ireo tra-pahoriana
- Mamela ny fihantsiana
- Miaritra amim-paharetana ireo mpisotasota
- Mivavaka amin'Andriamanitra ho an’ny velona sy ny maty
I Jesoa be famindrampo dia maniry ny hanatanterahan’ireo tia Azy asa famindrampo, farafahakeliny indray mandeha isan’andro, ary izany dia ho famantarana hita maso ny maha mpianatr’’i Kristy antsika eto anivon’izao tontolo izao amin’izao vanim-potoana misy antsika izao.
Ity taratasy ity dia toy ny savaranonando ihany amin’ny fametrahana ity Commission ity. Mbola lavitra ny lalana. Manantena indrindra ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana avy aminareo izahay. Manantena ny toro-hevitra avy aminareo koa ho fampanjariana ny iraka tontosainay, izay fanirahana ho antsika rehetra dia ny : « fitoriana ny hafaliana azo avy amin’ny Evanjely, ny Famindrampon’Andriamanitra, mba hahita ny toetrany efa hatrany am-boalohany indray ny « Trano iraisantsika ».
Ankinintsika amin’i Masina Maria, Renin’ny Famindrampo, Kintan’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao izay rehetra hotontosaintsika.
NB : « Ny fanehoam-piniavana antsoina hoe : « 24 ora ho an’ny Tompo », ny Zoma sy Asabotsy mialoha ny Alahady faha-4 amin’ny karemy, dia tokony hotohanana hahazo vahana, any amin’ny diosezy rehetra any. Maro aok’izany ny olona voasintona hanatona ny sakramentan’ny Fampihavanana ary misy tanora maro amin’izy ireny ; amin’izany no ahitany ny lalana-kizorana hiverenany any amin’ny Tompoiainany fotoam-bavaka lalina ary hahatsinjovany indray fa hay misy heviny ny fiainany. Aoka isika hiaiky marimarina fa tokony ho eo anivon’ny fiainantsika ny sakramentan’ny Fampihavanana, satria izy no manampy antsika hahatsapa mivantana ny halehiben’ny Famindrampon’Andriamanitra amintsika. Ho an’ny olona tsirairay mibebaka, dia io no ho loharano velona anovozany ny tena fiadanam-po marina », hoy i Papa Fransoa ao amin’ny taratasy fanambarana ny hisokafan’ny Taon-jobily tsy ara-potoana hankalazana ny Famindrampon’Andriamanitra, « Ny endriky ny Famindrampo », n˚ 17.
Antananarivo, ny 23 fevrie 2016
Connaître sa foi : Petit guide pour comprendre chaque jour de la Semaine sainte - il y a 6 jours
Fandraisana ny Papa Fransoa : « Faly aho handray ny Papa Ray Masina » hoy Ratsimbazafy Alain kandida Tim ao Atsimondrano - il y a 13 jours